စာသင်ကျောင်း / ကတ္ကသိုလ်ကျောင်းတွေ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သင့်ပြီလား ? ? ? – SoShwe
Home/Education/စာသင်ကျောင်း / ကတ္ကသိုလ်ကျောင်းတွေ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သင့်ပြီလား ? ? ?
စာသင်ကျောင်း / ကတ္ကသိုလ်ကျောင်းတွေ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သင့်ပြီလား ? ? ?
So Shwe February 14, 2021	Education Leaveacomment
Shadow ပညာရေးဌာနမှ အတွင်းရေးမှူး Rebecca Long-Bailey ဟာ COVID-19 ကို ဒီကမ္ဘာမြေပေါ်ကနေ အရှင်းတိုက်ထုတ်လိုက်နိုင်ပြီး လူသားတွေအနေနဲ့ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရဖို့ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ဘဲ အိမ်အတွင်းကနေ အိမ်အပြင်ကို စိတ်ချလက်ချသွားလာနိုင်တဲ့ အချိန်ကာလရောက်မှသာ စာသင်ကျောင်းတွေကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့ အခိုင်အမာသတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကလေးငယ်တွေဟာ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရခြင်းမရှိဘဲ ကျောင်းတက်ရောက်နိုင်ဖို့ ပြည့်စုံတဲ့ကျန်းမာရေး ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကို စာသင်ကျောင်းတွေမှာ ပေးစွမ်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ မိဘပြည်သူတွေကို အသိပေးပြီး မိဘပြည်သူတွေက လက်ခံနိုင်မှသာ အဆင်ပြေနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း အကြံပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေ ၊ အခြားသော ဌာနအသီးသီးနဲ့ အဖွဲ့စည်းအသီးသီးမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို လုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဆင်းခွင့်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်တာကြောင့် ပညာရေးဝန်ကြီးတွေဟာလည်း စာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ တက္ကသိုလ်ကောလိပ်ကျောင်းတွေကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို ဆက်လက်ပညာသင်ယူနိုင်ဖို့ စီစဉ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း အလေးထားစဉ်းစားလာကြပါတယ်။
ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ ဆက်လက်ပညာသင်ယူနိုင်ဖို့ စာသင်ကျောင်းများနဲ့ တက္ကသိုလ်ကောလိပ်ကျောင်းများကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မယ်ဆိုတဲ့ အကြံဉာဏ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Shadow ပညာရေးဌာနမှ အတွင်းရေးမှူးကြီး Rebecca Long-Bailey က အပြင်းအထန်ကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။
Rebecca Long-Bailey က စာသင်ကျောင်းတွေကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မယ်ဆိုရင် လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကို ပေးစွမ်းနိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း နှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူတွေထဲမှာ တချို့ကတော့ အသက်ဆုံးပါးသွားရပြီး အချို့ကတော့ ပြန်လည်ကျန်းမာလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အချို့နိုင်ငံတွေမှာလည်း ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူ မရှိသလောက်ဖြစ်အောင် ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရနိုင်ချေ ရှိနေပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း Rebecca Long-Bailey က ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ မိဘတွေဟာလည်း ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးအဆုံးမသတ်ခင်အထိတော့ သူတို့ရဲ့ကလေးတွေကို စာသင်ကျောင်းတွေမှာ သွားရောက်ပညာသင်ယူဖို့ စိတ်မချနိုင်သေးတာမျိုးတွေရှိနေကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Rebecca Long-Bailey ရဲ့ အကြံပေးချက်ကို သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ပညာရေးဟာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို အဓိကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေတဲ့ အရေးပါတဲ့မဏ္ဍိုင်တွေထဲတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် တိုးတက်တဲ့ပညာရေးကို ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် အနာဂါတ်မျိုးဆက်သစ်တွေဟာ ကျန်းမာသန်စွမ်းနေဖို့ လိုတာကို သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကပ်ရောဂါဆိုးကြီး ဒီကမ္ဘာမြေပေါ်ကနေ အပြီးအပိုင်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အခါမှသာ စာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ တက္ကသိုလ်ကောလိပ်ကျောင်းတွေကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ Rebecca Long-Bailey ရဲ့ သတိပေးချက်ကို အားလုံးကအလေးထားသင့်ပါတယ်။
စာသင္ေက်ာင္း / ကတၠသိုလ္ေက်ာင္းေတြ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္သင့္ၿပီလား ? ? ?
Shadow ပညာေရးဌာနမွ အတြင္းေရးမွဴး Rebecca Long-Bailey ဟာ COVID-19 ကို ဒီကမာၻေျမေပၚကေန အရွင္းတိုက္ထုတ္လိုက္ႏိုင္ၿပီး လူသားေတြအေနနဲ႕ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရဖို႔ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ အိမ္အတြင္းကေန အိမ္အျပင္ကို စိတ္ခ်လက္ခ်သြားလာႏိုင္တ့ဲ အခ်ိန္ကာလေရာက္မွသာ စာသင္ေက်ာင္းေတြကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ဖို႔ အခိုင္အမာသတိေပးေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ကေလးငယ္ေတြဟာ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရျခင္းမရွိဘဲ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ ျပည့္စံုတဲ့က်န္းမာေရး ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြကို စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ေပးစြမ္းႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ မိဘျပည္သူေတြကို အသိေပးၿပီး မိဘျပည္သူေတြက လက္ခံႏိုင္မွသာ အဆင္ေျပႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း အၾကံေပးေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။
အခုခ်ိန္မွာဆိုရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြ ၊ အျခားေသာ ဌာနအသီးသီးနဲ႔ အဖြဲ႔စည္းအသီးသီးမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြကို လုပ္ငန္းခြင္ျပန္ဆင္းခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးေတြဟာလည္း စာသင္ေက်ာင္းေတြနဲ႔ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ေက်ာင္းေတြကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကို ဆက္လက္ပညာသင္ယူႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးထားစဥ္းစားလာၾကပါတယ္။
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႕ ဆက္လက္ပညာသင္ယူႏိုင္ဖို႔ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားနဲ႔ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္မယ္ဆိုတဲ့ အၾကံဉာဏ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Shadow ပညာေရးဌာနမွ အတြင္းေရးမွဴးႀကီး Rebecca Long-Bailey က အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္လိုက္ပါတယ္။
Rebecca Long-Bailey က စာသင္ေက်ာင္းေတြကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္မယ္ဆိုရင္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကို ေပးစြမ္းႏိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏႈိးေဆာ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရသူေတြထဲမွာ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ အသက္ဆံုးပါးသြားရၿပီး အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ျပန္လည္က်န္းမာလာခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရသူ မရွိသေလာက္ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္လည္း ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရႏိုင္ေခ် ရွိေနပါေသးတယ္။
ဒါေၾကာင့္လည္း Rebecca Long-Bailey က ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ မိဘေတြဟာလည္း ကပ္ေရာဂါဆိုးႀကီးအဆံုးမသတ္ခင္အထိေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ကေလးေတြကို စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ သြားေရာက္ပညာသင္ယူဖို႔ စိတ္မခ်ႏိုင္ေသးတာမ်ိဳးေတြရွိေနေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။
Rebecca Long-Bailey ရဲ႕ အၾကံေပးခ်က္ကို သံုးသပ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပညာေရးဟာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို အဓိကဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစတဲ့ အေရးပါတဲ့မ႑ိဳင္ေတြထဲတစ္ခုျဖစ္တာေၾကာင့္ တိုးတက္တဲ့ပညာေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြဟာ က်န္းမာသန္စြမ္းေနဖို႔ လိုတာကို သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကပ္ေရာဂါဆိုးႀကီး ဒီကမာၻေျမေပၚကေန အၿပီးအပိုင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားတဲ့အခါမွသာ စာသင္ေက်ာင္းေတြနဲ႔ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ေက်ာင္းေတြကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ Rebecca Long-Bailey ရဲ႕ သတိေပးခ်က္ကို အားလံုးကအေလးထားသင့္ပါတယ္။
Previous Demi Lovato နဲ့ Selena Gomez တို့အကြား ဆက်ဆံရေးအခြေအနေ။
Next ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းရဲ့ကြယ်ပွင့်တစ်ဦးကို ချိတ်ဆက်နေသည့် ယူနိုက်တက်။
ငယ်စဉ်အခါက စာသင်ကျောင်းများမှာ မသင်ခဲ့ရတဲ့သိပ္ပံဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ တချို့သောအရာတွေဟာ ထူးခြားဆန်းပြားပြီး မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင် ဖြစ်စေတဲ့အတွက် တစ်ခါတစ်လေမှာ ကမ္ဘာကြီးဟာ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ နေရာတစ်ခုလို့တောင် ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ကမ္ဘာကြီးက ဘယ်လို ဘယ်ပုံတွေကြောင့် …